प्रचण्डलाई जसपाले भन्यो- हामी सबैलाई सहयोग गर्न मात्रै जन्मिएका हौं र? – Gandaki Chhadke
प्रचण्डलाई जसपाले भन्यो- हामी सबैलाई सहयोग गर्न मात्रै जन्मिएका हौं र?
By गण्डकी छड्के On Mar 10, 2021
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूहरूलाई सहयोग गर्न जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार माओवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दुई पार्टीबीच भएको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारेको छलफलमा प्रचण्डले जसपाको सहयोग मागेका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ट नेता महतोले रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेश/थारूहट आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सवालमा हामीलाई सहयोग गर्नेलाई आफूहरूको साथ रहने भनि प्रचण्डलाई आश्वस्त पारेका थिए। उनले आफ्ना मुद्दाका विषयमा पटक पटक केपी ओली समक्ष राखिए पनि ओलीले ठग्ने बाहेक केही काम नगरेको भन्दै यस्तो वातावरणमा कसरी सहयोग गर्ने भनि प्रश्न गरेका थिए।
उनले आफ्नो मागहरु जसले पुरा गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्नेसमेत बताए। ‘केपी ओलीको सरकारलाई पहिल्यै समर्थन गरेर हेरिसक्या होइन? फेरि गर्ने? त्यसैको लागि जन्मिया हामी? यी शासक, सम्भ्रान्तहरुलाई सित्तैमा समर्थन गर्न जन्म्या हो हामी? मागहरु पुरा गरे हुन्छ नत्र हुँदैन।
हामीले भन्दै आएका मागहरु जसले पुरा गर्छ त्यसप्रति सहानुभूति हुन्छ हाम्रो’, उनले भने, ‘रेशम चौधरी लगायतका मुद्दाच फिर्ता, मधेश/थरूहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सवालहरु आजको होइन नि, यो त पटक पटक राखेकै हो नि केपी ओलीलाई नि राखेको, समर्थन पनि गरेको हो नि त। ठग्ने बाहेक केहि काम गरेको छ केपी ओलीले? काम गरेर देखाउनुपर्‍यो हामी साथ दिन्छौं।’
दाहालले मंगलबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गरिदिएपछि नयाँ सत्ता समिकरणको प्रयास अगाडि बढेका छन् ।आजै संसद भवनमा जसपाका नेताहरूले रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सबै पार्टीसँग छलफल गर्ने बताएका थिए।
बिनयजंग बस्नेत छुटे, समर्थक र शुभचिन्तकद्वारा अबिर र फूलमालाले स्वागत